Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > အထူးကဏ္ဍ > သုတေသန > မြန်မာကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိစ္စ
မြန်မာကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိစ္စ	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၁၆ မိနစ်	နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ စီးပွားရေးအကြံပေး ဒေါက်တာဦးမြင့် ရေးသားပြုစုပြီး နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သော အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ဖတ်ကြားခဲ့သော “ မြန်မာကျပ်ငွေလဲနှုန်းကိစ္စ” စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းမှာ အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပြီး Myanmar Kyat exchange rate issue" ဟု အမည်ပေးထားက မြန်မာဘာသာပြန်ကို ပညာရှင် ဒေါက်တာဦးမြင့်ကပင် ဖြန့်ဝေထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုစာတမ်းကို မြန်မာအဆင့်မြင့်အာဏာပိုင်များသို့ ဇွန် ၂၅ ရက်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် တင်ပြထားခဲ့သည်။နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန၊ နေပြည်တော် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ (၁၉-၂၁)ရက်မြန်မာကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိစ္စ (ပြုစုသူ - ဦးမြင့် )အပိုင်း ဒေါက်တာ ဦးမြင့် အကြံပြုချက် အကျဉ်း
ပို့ကုန်အခွန် (၁ဝ)% ကောက်ခံနေ သည်ကို ရပ်တန့်သင့်
ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းများတွင် လိုင်စင် လျှောက်ထားရသော စနစ်ကို ပယ်ဖျက်ရန်
ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် အစိုးရက ဒေါ်လာများ ဝယ်ယူသော နည်းလမ်း
ဘဏ်အတိုးနှုန်းကို သင့်တော်သလို လျှော့ချရန် (သတိနှင့် လုပ်ဆောင်ရန်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့(IMF) ထံမှ နည်းပညာ အကူအညီ တောင်းခံရန် (အားလုံး လိုက်နာစရာ မလို)
ကျောက်မျက်လေလံပွဲ အရေအတွက်ကို အထိုက်အလျောက် လျှော့ချရေး စဉ်းစားရန်
ကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်မားလာသည့် ကိစ္စအပေါ် အစိုးရက ပြည်သူလူထုသို့ ထုတ်ပြန်ရန်
နိုင်ငံအဆင့် စီးပွားရေး စာရင်းအင်း အချက်အလက်များကို တရားဝင် ပုံမှန် ထုတ်ဝေရန် (ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်း၊ နိုင်ငံခြား သီးသန့် ရန်ပုံငွေ၊ အမျိုးသားရေး သုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်း၊ ငွေကြေး ပမာဏ၊ ဂျီဒီပီ (ကဏ္ဍအလိုက်နှင့် တိုးတက်မှုနှုန်း)၊ အိမ်ထောင်စု ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ် စစ်တမ်း များ၊ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းများ)
(၁) နိဒါန်း၁။ လွန်ခဲ့သည့် လအနည်းငယ်အတွင်း မြန်မာကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်းသည် သိသိသာသာ တောက်လျောက် တက်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ကျပ်ငွေတန်ဘိုးတက် လာသည့် အတိုင်းအတာနှင့် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ စရိတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်များအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်ပုံ ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး စီးပွားရေး အကြံပေးအဖွဲ့ဝင် ဦးဆက်အောင် ပြုစုထားသော စာတမ်းတွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယင်းအချက်အလက်များကို ဤစာတမ်းတွင် ထပ်မံ မဆွေးနွေးတော့ဘဲ အောက်ပါကိစ္စ သုံးရပ်ကိုသာ ဖော်ပြသွားပါမည်။ ၄င်းတို့မှာ – ၂။ ပထမဦးစွာ မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် ငွေတန်ဘိုး
ပြည်ပဈေးကွက်တွင် မပါဝင်သည့် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် ငွေလဲလှယ်နှုန်း တက် သွားခြင်း၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု မရှိပါ။ တကယ်တော့ ငွေလဲလှယ်နှုန်း တက်သွားခြင်း ကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးပင် ရရှိနိုင်ပါသေးသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ငွေလဲလှယ်နှုန်း တက်သွား ခြင်းကြောင့် သွင်းကုန်များ၏ တန်ဘိုးကို ပြည် တွင်း သုံးငွေကြေးဖြင့် တွက်လျှင် ဈေးသက်သာ သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံ ခြား ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောင်းချသော စူပါမားကတ်သည် အမြတ် ပိုမို ရရှိနိုင်ပါသည်။ အလားတူပင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု သည်လည်း စက်ပစ္စည်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်း များကို ပြည်ပမှ ဈေးသက်သက် သာသာဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်၍ အမြတ်ပိုရနိုင်ပါသည်
မြန်မြန်ဆန်ဆန် တက်ရပြီး၊ မည်ကဲ့သို့ ပြဿနာများဖြစ်ပေါ် စေသည်ကို ရှင်းပြရန်။၃။ ဒုတိယအချက် အနေဖြင့် ကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်း တက် သည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြီး၊ ငွေလဲလှယ် နှုန်းအပေါ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ယုံကြည် စိတ်ချမှု ပြန်လည် ရရှိ၍့၊ ပြဿနာ ပိုမို ဆိုးရွား မသွားစေရေးတို့အတွက် လတ်တလော ဆောင်ရွက်သင့်သည့် နည်းလမ်းများကို အကြံပြုရန်။၄။ တတိယအချက် အနေဖြင့် လောလောဆယ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ငွေလဲလှယ်နှုန်းပြဿနာသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေလဲလှယ် စနစ်ကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲရန် အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ ထိုအခွင့်ကောင်းကိုယူ၍ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွန်း မှီသည့် နိုင်ငံခြားငွေ ဈေးကွက်တစ်ခု တည်ထောင်ရန် သင့်ပါသည်။ ထိုဈေးကွက်က အသင့်အတင့် တည်ငြိမ်သည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို သတ်မှတ်ပေးပါမည်။ ထို့အပြင် မြန်မာဗဟိုဘဏ် အနေဖြင့်လည်း ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို စီးပွားရေး စီခံခန့်ခွဲမှုတွင် ပို၍ထိရောက် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ယင်းကဲ့သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ရန် အကြံပြုချက်များကို ဤစာတမ်းတွင် အကျဉ်းမျှ ဖော်ပြ ထားပါသည်။အပိုင်း(၂)ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်မားလာခြင်း၏ အကြောင်းတရားနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၅။ ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်၏ သဘောတရား တစ်ခုဖြစ်သည့် ဒတ်ခ်ျရောဂါ (Dutch disease) သည် ရုတ်တရက် ငွေတန်ဖိုး တက်ရခြင်းနှင့် ၎င်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လူသိများ ပြီးထင်ရှားသည့် သာဓက တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၆ဝ) ပြည့်လွန်နှစ်များက နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်က နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိသော သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အများအပြားကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရောင်းချခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားငွေ အများအပြား လှိမ့်ဝင်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒတ်ခ်ျ ပြည်တွင်းသုံးငွေ ဂီလ်ဒါ (Guil der) ၏ ငွေလဲလှယ်နှုန်း ထိုးတက်သွားစေခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ငွေလဲလှယ်နှုန်း တိုးတက်သွားခြင်းကြောင့် အကျိုး သက်ရောက်မှု (၄)မျိုး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။၆။ ပထမအချက် အနေဖြင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်မားသွားသော်လည်း တိုင်းပြည်၏ သယံဇာတဖြစ်သော သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ကို နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချမှု အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိခဲ့ပါ။ သို့ဖြစ်၍ ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်မားသွားသော်လည်း နယ်သာလန်၌ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တင်ပို့မှု ဆက်လက် အားကောင်း စန်းပွင့်နေပြီး နိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံခြားငွေ အများအပြား ဆက်လက် ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ပြည်ပပို့ကုန် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းကို နယ်သာလန်တွင် “စန်းပွင့်လုပ်ငန်း” (Booming sector) ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။၇။ ဒုတိယအချက် အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် မပါဝင်သည့် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ထုတ်လုပ်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ရှိပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကို သာဓက အဖြစ် ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းကနိုင်ငံအတွင်း အဆောက်အဦး၊ လမ်း၊ တံတားစသည်တို့ကို တည်ဆောက်ပေးပါသည်။ သို့သော် ဆန်၊ ပဲနှင့်ရေထွက်ကုန်များကဲ့သို့ လမ်းနှင့် တံတားများကို နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များသို့ တင်ပို့ရောင်းချခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုပြည်တွင်းမှာသာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ “ ပြည်ပ ကုန်သွယ်ရေးတွင် အကျုံးမဝင်သော ကုန်စည်များ” (non-traded goods) ဟူ၍ သတ်မှတ်ပါသည်။ အလားတူပင် စူပါမားကတ်၏ လက်လီ ရောင်းချသော လုပ်ငန်းများသည် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ ရောင်းချခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ ၄င်းတို့သည် ပြည်တွင်း စားသုံးသူများ အတွက်သာ အသုံးဝင်ပြီး “ ပြည်ပ ကုန်သွယ်ရေး တွင် အကျုံးမဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ” (non- traded services) ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ သတိပြုသင့်သည့် အချက်မှာ ပြည်ပဈေးကွက်တွင် မပါဝင်သည့် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် ငွေလဲလှယ်နှုန်း တက်သွားခြင်း၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု မရှိပါ။ တကယ်တော့ ငွေလဲလှယ်နှုန်း တက်သွားခြင်းကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးပင် ရရှိနိုင် ပါသေးသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ငွေလဲလှယ်နှုန်း တက်သွားခြင်းကြောင့် သွင်းကုန်များ၏ တန်ဘိုးကို ပြည်တွင်း သုံးငွေကြေး ဖြင့်တွက်လျှင် ဈေးသက်သာသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြား ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောင်းချသော စူပါမားကတ်သည် အမြတ် ပိုမို ရရှိနိုင်ပါသည်။ အလားတူပင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုသည်လည်း စက်ပစ္စည်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှ ဈေးသက်သက်သာသာဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်၍ အမြတ်ပိုရနိုင်ပါသည်။၈။ တတိယအချက် အနေဖြင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အများ
သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အများအပြား တင်ပို့မှုကြောင့်ငွေလဲလှယ်နှုန်း တောက်လျောက် တိုးတက် နေပါက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စက်မှုလက်မှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတို့၏ ပို့ကုန် များ၏ ကမ္ဘာ ဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်းကဏ္ဍ များ၏ ပို့ကုန်မှ ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေကိုပြည်တွင်းသုံးငွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်သည့် အခါ ရရှိသည့်ငွေ လျော့သွားစေပြီး၊ ကုန်ကြမ်းနှင့် လုပ်အားခကို ပြည်တွင်း သုံးငွေဖြင့် ပေးချေ ရခြင်းကြောင့်လည်း အသားတင် ဝင်ငွေကိုလျော့ပါးစေပါသည်။ အကယ်၍ ငွေလဲလှယ် နှုန်းသည် အတားအဆီးမဲ့ တိုးတက် နေလျှင် ပို့ကုန်မှ ရသော ဝင်ငွေသည် ထုတ်လုပ်မှု စရိတ်ကို ကာမိတော့မည်မဟုတ်ဘဲ၊ အရှုံးပြကာ လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းရစေနိုင်ပါသည်
အပြားတင်ပို့မှုကြောင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်း တောက်လျောက် တိုးတက်နေပါက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စက်မှုလက်မှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတို့၏ ပို့ကုန် များ၏ ကမ္ဘာဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်း ကဏ္ဍများ၏ ပို့ကုန်မှရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေကို ပြည်တွင်း သုံးငွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်သည့်အခါ ရရှိသည့်ငွေလျော့သွားစေပြီး၊ ကုန်ကြမ်းနှင့် လုပ်အားခကို ပြည်တွင်း သုံးငွေဖြင့် ပေးချေရခြင်းကြောင့်လည်း အသားတင် ဝင်ငွေကို လျော့ပါးစေပါသည်။ အကယ်၍ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် အတားအဆီးမဲ့ တိုးတက် နေလျှင် ပို့ကုန်မှ ရသော ဝင်ငွေသည် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကို ကာမိတော့မည်မဟုတ်ဘဲ၊ အရှုံးပြကာ လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းရစေနိုင်ပါသည်။ငွေလဲလှယ်နှုန်းတိုးမြှင့်လာခြင်းကြောင့် ယိုယွင်းကျဆင်း လာသော စက်မှုနှင့်လယ်ယာကဏ္ဍတို့ကို “နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့သောကဏ္ဍများ” (Lagging sectors) ဟု သတ်မှတ်ခြင်း ခံရပါသည်။ ထို့အပြင် ငွေလဲလှယ်နှုန်း တက်လာခြင်းကြောင့် ဈေးချိုသာစွာ ဝင်ရောက် လာသောပြည်ပမှ သွင်းကုန် များသည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ထိုကုန်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချ နေရသော သွင်းကုန် အစားထိုး လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။ ထိုသို့သောအကြောင်းများ ကြောင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် စက်မှုကဏ္ဍ ကျဆင်း သွားသည့် ဖြစ်ရပ်ကို London Economist မဂ္ဂဇင်းက ဒတ်ခ်ျရောဂါ (Dutch disease) ဟု (၁၉၇၇) ခုနှစ်တွင် စတင်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။၉။ စတုတ္ထအချက်အနေဖြင့် နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့သော လယ်ယာနှင့်စက်မှုကဏ္ဍတို့မှ လုပ်သားနှင့် အရင်းအနှီး တို့သည် စန်းပွင့်နှင့် ပြည်ပဈေးကွက်တွင် မပါဝင်သော လုပ်ငန်းများသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားရန် အလားအလာများပေါ်ပေါက်နိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့ကို ကောင်းသည့် အလားအလာများဟု မယူဆ နိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ကဏ္ဍများသည် ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုံလောက်စွာရရှိနေသဖြင့် ပြည်တွင်းမှ ထပ်မံ အရင်းအနှီးမြှုပ်နှံရန် မလိုအပ်ပါ။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများက မိမိတို့၏ လောင်စာ လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် လုံလောက်သော အရင်းအနှီး မြှုပ်နှံ ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကဏ္ဍသည် စက်ကိရိယာကို အားကိုးသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သဖြင့် အလုပ်အကိုင် ပေးနိုင်စွမ်း အနည်းငယ်မျှသာ ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် လိုအပ်သည့် လုပ်အားကိုလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် ပြင်ပနိုင်ငံများမှ တစ်ပါတည်း ခေါ်ဆောင်လာတတ် ကြပါသည်။၁ဝ။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စူပါမားကတ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်သော်လည်း အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ထိုလုပ်ငန်းများမှ နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုသည့် နည်းပညာနှင့်အတတ်ပညာ ရရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးပါသည်။ အထူးသတိပြုသင့်သည်မှာ ခောတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သောနိုင်ငံအတွက် အခြေခံကျသော နည်းပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ရေးပညာများကို စက်မှုကဏ္ဍ၌ ရရှိရန် အလားအလာကောင်းကြောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။၁၁။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် လူအများစုမှီခို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုရာဖြစ်ပြီး၊ ဆင်းရဲသားအများစုရှိရာ ကဏ္ဍတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်း တိုးတက်ခြင်းကြောင့်ကျေးလက်ဒေသနေ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းနှင့် တွေ့ကြုံခံစားရန်မသင့်ပါ။၁၂။ ဒတ်ခ်ျရောဂါကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် နိုင်ငံ၏သဘာဝဓနကို နိုင်ငံခြားသို့ ရောင်းချခြင်း ကြောင့်သာမက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် (နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပါအဝင်) ပြည်တွင်းသို့ စီးဆင်းဝင်ရောက်လာသောနိုင်ငံခြားငွေများကြောင့် ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းတို့လည်း ပါဝင် ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနှင့်စက်မှုကဏ္ဍတို့ နောက်ကျသွားစေအောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဤဝေဒနာမျိုး ခံစားနေရပြီဟု သံသယဖြစ်စရာ အကြောင်းအရာ အချို့ တွေ့ရှိနေရပါသည်။ အပိုင်း(၃)ကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်မားလာခြင်းနှင့် မလိုလားအပ်သော အကျိုးဆက်များကို ဖြေရှင်းရန်အကြံပြုချက်များ၁၃။ ကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း တက်သည့် ပြဿနာကို အချိန်ကိုက် ဖိဖိစီးစီး ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် (၁၉၉၇-၉၈)ခုနှစ် အာရှဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ဖြစ်ပွားစဉ် အခါက အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသကဲ့သို့ ငွေကြေးပြဿနာမှ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး ပြဿနာများ အဖြစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်း သွားတတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။၁၄။ မကြာသေးမီက ဆက်ဒမ်ဟူစိန်သည် ပင်လယ်ကွေ့
ငွေလဲလှယ်နှုန်းတက်လာခြင်းကြောင့် ဈေးချိုသာစွာ ဝင်ရောက် လာသော ပြည်ပမှ သွင်းကုန် များသည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ထိုကုန်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချ နေရသော သွင်းကုန် အစားထိုး လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်
စစ်ပွဲကို “စစ်ပွဲတကာတို့၏ မိခင်စစ်ပွဲကြီး” (Mother of all wars) ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲသည် ဆက်ဒမ်အတွက် နိဂုံး မကောင်းခဲ့သော်လည်း သူ၏ အဆိုကို အသုံးပြု၍ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် တိုင်းပြည်ငွေကြေး၏ဈေးနှုန်း ဖြစ်သောကြောင့် “ဈေးနှုန်းတကာတို့၏ မိခင်ဈေးနှုန်းကြီး” (Mother of all prices) ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မိခင်တစ်ယောက် ကဲ့သို့ပင် ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် နိုင်ငံစီးပွား ကြံ့ခိုင်မှုအပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုးပါသည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံခြား ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် အခြားသောဈေးနှုန်းများ ကဲ့သို့ပင် ဈေးနှုန်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားတို့ကသာ ပြဌာန်းပါသည်။ ၁၅။ ဝယ်လိုအား (ဥပမာ-ဒေါ်လာဝယ်လိုအား) (၃)မျိုး ရှိပါသည်။ ပထမအမျိုးမှာ ဈေးကွက်တွင် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သော လှည့်ပတ် သုံးစွဲရန် ဝယ်လိုအား (Transaction Demand) ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယ အမျိုးမှာ လိုလိုမယ်မယ် အရေးအကြောင်းပေါ်လျှင် သုံးစွဲရန်အတွက် ကြိုတင်ဆောင်ထားရန် ဝယ်လိုအား (Precautionary Demand) ဖြစ်ပါသည်။ တတိယအမျိုးမှာ ဈေး ကစားရန်ဝယ်လိုအား (Speculative Demand)ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမှာ နိုင်ငံခြားငွေ၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ မြေ ယာ၊ စတော့ရှယ်ယာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်တို့၌ ဈေးကစားရန် ရည်ရွယ်သော ဝယ်လိုအားမျိုး ဖြစ်ပါသည်။၁၆။ နိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက်တွင် ရောင်းလိုအားကို မြန်မာနိုင်ငံရှု့ထောင့်မှ ကြည့်မည်ဆိုပါက သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရောင်းချခြင်း၊ ကျောက်မျက်လေလံပွဲများကျင်းပခြင်း၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့် အထူး စီးပွားရေးဇုန်တို့တွင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေအများအပြား ဝင်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများမှ ပုဂ္ဂလိက အရင်းအနှီးများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်လာခဲ့မှု့များလည်း ပါဝင်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတိုးနှုန်းမြင့်မားနေခြင်းကို အခွင့်ကောင်းယူရန်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ပွင့်လင်းလာမည်ဟု မျှော်လင့်၍ မြေယာနှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ ဝယ်ယူရန်တို့အတွက် ဝင်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ ပြည်သူပိုင်မှ ပုဂ္ဂလိကပိုင်သို့ ဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ် (privatization) မှ လည်း ဒေါ်လာများ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသည်ဟု သတင်းများလည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ မည်သည့် နိုင်ငံမဆို ထိုပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ငွေရေးကြေးရေး အပေးအယူများ နှင့်ပတ်သက်သည့် မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် မလွယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့် မသေချာ မရေရာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ ဈေးကစားမှုများကိုပေါ်ပေါက်လာစေပါသည်။ ဤအခြေအနေများ ကိုအခြေခံ၍ ကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းမြင့်မားသည့် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် အဘက်ဘက်မှ အကြံပြုချက် များ လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် (၁၉၉၇-၉၈) ခုနှစ် အာရှ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ဖြစ်ပွားစဉ်အခါက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသကဲ့သို့ ငွေကြေးပြဿနာမှ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွား ရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာများအဖြစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းသွားတတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။၁၇။ မကြာသေးမီက(၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈)ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာတွင် အောင်မြင်မှု ရသင့်သလောက် ရရှိခဲ့သော်လည်း အခက်အခဲများ ကျန်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့နေရာ အတော်များများတွင် ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းများ ယနေ့ထက် တိုင်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ အကျပ်အတည်း မဖြစ်မီကာလ၌ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ဘဏ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဈေးကွက်များတွင် ရှိနေသော လုပ်ငန်းကြီးများ၊ အာမခံလုပ်ငန်းများ၊ စတော့ဈေးကွက် လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းကြီး များသည် အမြတ်အစွန်းများစွာ ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဤအချိန်တွင် ဘဏ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ကုမ္ပဏီကြီးများမှ ကျော်ကြား သော အမေရိကန် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်များ၏ မတော်မလျော် ဆောင်ရွက်မှုများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအမှုဆောင် အရာရှိချုပ်များ၏ ဇိမ်ခံရွက်လှေများ၊ နန်းတော်တမျှ ခမ်းနားသော တိုက်တာများ၊ ၎င်းတို့လုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီများတွင် များပြားသော အစုရှယ်ယာများနှင့် လစာအဖြစ် ဒေါ်လာသန်းချီ၍ တရားဝင် ခံစားခွင့်အဖြစ် ရရှိထားကြပါသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ အချို့ကုမ္ပဏီများက ၎င်းတို့၏ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအမှားများ ထုတ်ပြန်ကာ စာရင်းတွေ လိမ်လည်ခဲ့ကြကြောင်း အထောက်အထားများ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ ပါမောက္ခဂျိုးဇက်စတစ်ဂလစ်ဇ်က အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ထိပ်ဆုံးလူဦးရေ(၁)% သည် နိုင်ငံ ဝင်ငွေ၏ (၂၅)% ကို ယခုအခါ ပိုင်ဆိုင်နေကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍရှိ အထိန်းအချုပ်တော်တော်များများကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သော စီးပွားရေးလွတ်လပ်မှု မူဝါဒများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၁၈။ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ဖြစ်ပွားသည့် အခါ
နိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက်တွင် ရောင်းလိုအားကိုမြန်မာနိုင်ငံရှု့ထောင့်မှ ကြည့်မည်ဆိုပါက သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရောင်းချခြင်း၊ ကျောက်မျက် လေလံပွဲများကျင်းပခြင်း၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့် အထူး စီးပွားရေးဇုန်တို့ တွင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေ အများအပြား ဝင်လာခဲ့ ပါသည်။ ထို့အပြင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများမှ ပုဂ္ဂလိက အရင်းအနှီးများ မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်လာခဲ့မှု့များလည်း ပါဝင် သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတိုးနှုန်းမြင့်မားနေခြင်းကို အခွင့်ကောင်း ယူရန်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ပွင့်လင်းလာမည်ဟုမျှော်လင့်၍ မြေယာနှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ ဝယ်ယူရန်တို့အတွက် ဝင်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ ပြည်သူပိုင်မှ ပုဂ္ဂလိကပိုင်သို့ ဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ် (privatization) မှ လည်း ဒေါ်လာများ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသည်ဟု သတင်းများလည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်
ကုမ္ပဏီကြီးများ အခက်အခဲ တွေ့ကြပြီး၊ ဒေဝါလီ ခံရမည့် အခြေအနေသို့ ကျရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစိုးရသည် ကုမ္ပဏီတွေကို ကယ်တင်မည်(သို့မဟုတ်) မကယ်ဘဲ လွှတ်ပေးလိုက်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် လိုလာပါသည်။ ဤဆုံးဖြတ်ရန် ကိစ္စမှာ မလွယ်ကူပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားလျှင် လူအတော်များများ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ပါမည်။ စီးပွားရေး အခက်အခဲတွေနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရပါမည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းပြည်တွင် လူမှုရေး ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာပါမည်။ ထိုမှတဆင့် အစိုးရ သည် နိုင်ငံရေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း ရပါမည်။ သို့ဖြစ်၍ အမေရိကန် အခွန်ထမ်းတို့၏ သန်းထောင် ချီသော ဒေါ်လာငွေများကို အသုံးပြုကာ၊ ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် ဘဏ်များကို ကယ်တင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသော ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား ကယ်တင်ရသည့် အလုပ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ သာမက တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အတော်များများ၌လည်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ရပါသည်။၁၉။ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း အလားတူ ဆုံးဖြတ်ရခက်သော အခြေအနေကို ယခုအခါ ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ ငွေလဲလှယ်နှုန်း (၁) ဒေါ်လာတန်ဘိုး ကျပ်(၁ဝဝဝ) အထက်တွင် ရောက်နေစဉ်က စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တော၊ရေထွက်နှင့် စက်မှု ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့ရောင်းချနေသည့် လုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့အပေါ် ကောက်ခံသော ပို့ကုန် အခွန်(၁ဝ)% ကို ထမ်းဆောင်ရန် ဝန်မလေးခဲ့ကြပါ။ ထိုသို့ ပို့ကုန်အပေါ်မှ အခွန်ကောက်ခံခြင်းကို အခြား မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှ ကျင့်သုံးခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ အမှန်စင်စစ် ပို့ကုန်အခွန်ဟု ဆိုရာတွင် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် (၈)% နှင့် ဝင်ငွေခွန် (၂)% တို့ ပါဝင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသည် မှန်မှန်ကန်ကန် စနစ်တကျ စာရင်း ထားသိုမှု မရှိခြင်း၊ အခွန်ထမ်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များဘက်ကရော အစိုးရ အခွန်ကောက် သူများ ဘက်ကပါ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေ ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ကုန်သွယ်ခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန် ကောက်ခံရန် ခက်ခဲသဖြင့် လုပ်ရကိုင်ရ လွယ်ကူပြီး ထိရောက်မှုရှိသော ပို့ကုန်အပေါ် အခွန်ကောက်ခံသည့်နည်းကို ကျင့်သုံးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။အကြံပြုချက်များ၂ဝ။ ပထမအချက် အနေဖြင့် ကျပ်ငွေ ဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်း (၂ဝ)% မှ (၂၅)% အထိ တက်သွား သောအခါ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ၎င်းတို့အပေါ် ကောက်ခံနေသော ပို့ကုန်အခွန် (၁ဝ)% သည် ကြီးမားသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး တစ်ခုဖြစ်နေကြောင်း တညီတညွတ်တည်း တင်ပြလာကြပါသည်။ ကုမ္ပဏီ ကြီးများမှ အမှုဆောင် အရာရှိကြီးများ သာမက မိသားစုပိုင် လုပ်ငန်းငယ်များမှ ပိုင်ရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ အခြေအနေကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ယင်းတို့ တင်ပြသော အဆိုပြုချက်သည် မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်း တက်နေခြင်းကြောင့် အခက်အခဲ တွေ့နေသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ကယ်တင်သည့် အနေဖြင့် ပို့ကုန်အခွန် (၁ဝ)% ကောက်ခံနေ သည်ကို ရပ်တန့်သင့် ကြောင်း အကြံပြုလိုပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အခြားသောအစိုးရ အတော်များများ ကျင့်သုံးလေ့ရှိသည့် ငွေကြေး အကျပ်အတည်း (သို့မဟုတ်) ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းများနှင့် ကြုံတွေ့ရသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား ကူညီလေ့ရှိသည့် မူဝါဒများနှင့်လည်း ကိုက်ညီပါသည်။ ထို့အပြင် အစိုးရက ငွေကြေး ပြဿနာကို အလေးအနက်ထား ဖြေရှင်းနေကြောင်း ပြသလိုက်သည့် သာဓကတစ်ခုဟုလည်း ယူဆနိုင်ပါသည်။ငွေလဲလှယ်နှုန်း ပြဿနာ ပြေလည်သွားသည့် အခါ အခွန် ကောက်ခံသည့် စနစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်၍ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန်တို့ကို ပုံမှန်အခွန်ကောက်စနစ်ဖြင့် ထိထိ ရောက်ရောက် ကောက်ခံ နိုင်ပါလိမ့် မည်။၂၁။ ဒုတိယအချက် အနေဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းများတွင် လိုင်စင် လျှောက်ထားရသော စနစ်ကို ပယ်ဖျက် လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အရောင်းအဝယ် လုပ်ရန် အတွက်လိုအပ်သော ဒေါ်လာဝယ်လိုအား တိုးလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်လာ ဝယ်လိုအားကို သိသိသာသာ မြင့်မားစေပြီး၊ ကျပ်ငွေလဲလှယ် နှုန်းကို လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။၂၂။ တတိယအချက် အနေဖြင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် အစိုးရက ဒေါ်လာများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဝယ်ယူခြင်းကြောင့် အစိုးရလက်ဝယ် သီးသန့် နိုင်ငံခြား ရံပုံငွေများ တိုးပွားလာပါမည်။ အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်းရှိ အဓိက လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကို အလားတူဝယ်ယူရန်လည်း တိုက်တွန်းနိုင်ပါသည်။ ယခုအခါ (၁)ဒေါ်လာလျှင် ကျပ် (၇၅ဝ)နှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူနေကြသည် ဆိုပါစို့။ အစိုးရနှင့် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများက ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ဤကဲ့သို့ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် (၁)ဒေါ်လာ လျှင် ကျပ် (၉ဝဝ)နှုန်းအထိ ကျသွားမည် ဆိုကြပါစို့။ ထိုအခါ အစိုးရက (၁)ဒေါ်လာလျှင် ကျပ်(၁၅ဝ) မြတ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အစိုးရ အနေဖြင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်း တည်ငြိမ်ရန်အတွက် လဲလှယ်နှုန်းကို (၁) ဒေါ်လာလျှင် ကျပ်(၉ဝဝ) မှ ကျပ်(၁ဝဝဝ) အတွင်း သတ်မှတ်ခြင်းသည် သင့်တင့်မျှတသည် ဟုယူဆလျှင် မိမိလက်ဝယ်ရှိ သီးသန့် နိုင်ငံခြားငွေကို အသုံးချ၍ ဤနှုန်းတွင် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို ထိန်းထားနိုင်ပါမည်။၂၃။ စတုတ္ထအချက် အနေဖြင့် အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတိုးနှုန်း မြင့်မားနေခြင်းကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေများ ဝင်ရောက်လာသည် ဆိုလျှင် အတိုးနှုန်းကို သင့်တော်သလို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဘဏ်များ ပုံမှန်အမြတ်ရရန်အတွက် အပ်ငွေအပေါ် ပေးသော အတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေအပေါ် ကောက်ခံသော အတိုးနှုန်းတို့ အကြား လုံလောက်သော ခြားနားမှု ဆက်လက် ထားရှိရပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတိကြီးစွာ ထားရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုစေလိုပါသည်။ အတိုးနှုန်းကို ရုတ်တရက် ခပ်များများ ပြောင်းလဲလိုက်ပါက ငွေအပ်နှံ သူများ အနေဖြင့် စိုးရိမ်မှုများ လွန်ကဲလာပြီး၊ အပ်ငွေများ ပြန်လည် ထုတ်ယူကြသဖြင့် ဘဏ် အကျပ်အတည်းပေါ်ပေါက်စေနိုင်ပါသည်။၂၄။ ပဉ္စမအချက် အနေဖြင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်း ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာ၌ ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသော နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ကြုံတွေ့လေ့ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤကိစ္စတွင် အတွေ့အကြုံများစွာ ရှိသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့(IMF) ထံမှ နည်းပညာ အကူအညီ တောင်းခံသင့်ပါသည်။ သို့သော် (IMF) မှ နည်းပညာ အကူအညီ ရသောကြောင့် ၎င်း၏ အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် တာဝန်မရှိပါ။ ထို့အပြင် နောက်ရရှိမည့် ရလဒ်တစ်ခုမှာ (IMF) နှင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်း ပြဿနာကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက ဤကိစ္စကို အလေးအနက်ထား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြောင်း မြန်မာပြည်သူတို့ သာမက အာဆီယံ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များနှင့် နိုင်ငံတကာအဝန်းအဝိုင်း တွင်ပါ ယုံကြည်စိတ်ချမှုများ တိုးပွားလာစေနိုင်ပါသည်။ ၂၅။ ဆဌမအချက် အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ အမြောက်အမြား ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့် ငွေလဲလှယ်နှုန်း တိုးတက်စေသည့် ပြဿနာပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဆိုလျှင် ကျောက်မျက်လေလံပွဲ ကျင်းပသည့်အကြိမ် အရေအတွက်ကို အထိုက် အလျောက် လျှော့ချသင့်ပါသည်။၂၆။ သတ္တမအချက် အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုအခါ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ခံထားရသော အစိုးရ ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မတကြီးက မြင်သာထင်သာ၍ တာဝန်ရှိ တာဝန်ယူသော မူဝါဒ ချမှတ် ကျင့်သုံးမည်ဟုကြေငြာထား ပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်မားလာသည့် ကိစ္စသည် မြန်မာပြည်သူ အမြောက်အမြား စိုးရိမ်နေကြသည့် ပြဿနာ တခု ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရက ကြေငြာချက်တရပ် ထုတ်ပြန်သင့်ပါသည်။ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့် နေရာ၊ မည်သို့မည်ပုံ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်မည် ဆိုသည်ကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၏ ဆန္ဒ အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။၂၇။ အဌမအချက်အနေဖြင့် ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသည် မှန်မှန်ကန်ကန် စနစ်တကျ စာရင်း ထားသိုမှု မရှိခြင်း၊ အခွန်ထမ်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ဘက်ကရော အစိုးရ အခွန်ကောက် သူများ ဘက်ကပါ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေ ရှိနေခြင်း တို့ကြောင့် ကုန်သွယ်ခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံရန် ခက်ခဲ သဖြင့် လုပ်ရကိုင်ရ လွယ်ကူပြီး ထိရောက်မှုရှိသော ပို့ကုန်အပေါ် အခွန် ကောက်ခံသည့်နည်းကို ကျင့်သုံးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်
အကျပ်အတည်းများ၌ ကောလာဟလများ၊ သတင်း အချက်အလက် မှန်ကန်စွာ မရမှုများ နှင့် သတင်းမှားများ တမင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ ကြောင့် ဈေးကစားသူများ ပေါ်ပေါက် တိုးပွားလာတတ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် များကကဲ့သို့ အဓိကနိုင်ငံ အဆင့် စီးပွားရေး စာရင်းအင်း အချက်အလက်များကို တရားဝင် ပုံမှန် ထုတ်ဝေသင့် ပါသည်။ ယင်း အချက်အလက်များတွင် ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်း၊ နိုင်ငံခြား သီးသန့် ရန်ပုံငွေ၊ အမျိုးသားရေး သုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်း၊ ငွေကြေးပမာဏ၊ ဂျီဒီပီ(ကဏ္ဍအလိုက်နှင့် တိုးတက်မှုနှုန်း)၊ အိမ်ထောင်စု ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ် စစ်တမ်းများ၊ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများ ပါဝင်ပါသည်။အပိုင်း(၄)မြန်မာငွေလဲလှယ်နှုန်းစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၂၈။ အကျပ်အတည်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာလျှင် ၎င်းသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စတင်ရန် အခွင့်အခါ ကောင်းကို ဖန်တီးပေးတတ် ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မြန်မာကျပ်ငွေ လဲလှယ်နှုန်း ပြဿနာကို ငွေလဲလှယ် နှုန်းစနစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ရန်အတွက် အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဟု ယူဆ၍ ဆက်လက်အရေးယူ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ သို့သော် ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် နက်နဲသော လေ့လာ စိစစ်သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်၍ ယခုစာတမ်းငယ်၏ဘောင်ကို ကျော်လွန်နေပါသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေလဲလှယ်နှုန်း စနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး ဒေသနှင့်နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အတွက် ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်မည့် အခြေခံကျသောအချက် (၂)ရပ် ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-• ပထမအချက်အနေဖြင့် လောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိနေသော ငွေလဲလှယ်နှုန်းအမျိုးမျိုးကို တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင် စုစည်းရန် (exchange rate unification) နှင့် • ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏လက်ရှိ ငွေပေးငွေယူရှင်းတမ်း (balance of payments) သာမန်စာရင်း (current account) တွင် ချမှတ်ထားသော အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။၂၉။ အထက်ပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရေးသည် ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိစ္စချည်းသက်သက် မဟုတ် တော့ပါ။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံအဆင့် စီးပွားရေး မူဝါဒ (macroeconomic policy) များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အချိန်ယူ အလေးပေး ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် လောလောဆယ် ကြုံတွေ့နေရ သည့် ကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းပြဿနာ၏ (macro) စီးပွားရေးမူဝါဒ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်ရန် နှိုးဆော်ပေးချက်ကို လက်ခံသဘောပေါက်ပြီး လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
We have 164 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved